BBC mawduux xiiso leh Sababta aysan dadka hodanka ah ee Hindiya u bixinin lacagtooda | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin BBC mawduux xiiso leh Sababta aysan dadka hodanka ah ee Hindiya...
BBC mawduux xiiso leh Sababta aysan dadka hodanka ah ee Hindiya u bixinin lacagtooda
Bilyaneerka reer Hindiya Azim Premji ayaa dhawaan waxa uu noqday qofka ugu deeqda bixinta badan dalka Hindiya, iyadoo taasi ay ka dhigayso mid sii xajistay booskiisa ah inuu ka mid yahay dadka adduunka ugu wax bixinta badan. Laakiin deeqsinimadiisa waxay muujisay in waddanka Hindiya ay hay’addaha samafalka waxay bixiyaan aysan u muuqan in ay la mid tahay hantida ay dadka haystaan. Wariyaha BBC-da Aparna Alluri ayaa sidaas sheegtay.
Iyada oo uu ballan-qaadkiisii ugu dambeeyay uu gaarayo $ 7.5bn, Mr Premji’s wadarta guud ee deeqaha uu bixiyay hadda waxay maraysaa 1.45tn rupees ($ 21bn; £ 15.8bn). taas macnaheeda waa in uu hal kaalin kula jiro dadka aduunka ugu wax bixinta badan- sida Bill iyo Melinda Gates, iyo Warren Buffet.
Wuxuu dadka kala kaga duwan yahay ee deeq bixiyayaasha ah , ayaa ah inuusan ku jirin kaalmaha ugu horreeya dadka aduunka ugu taajirsan – Bloomberg Billionaires Index qiimayn ay samaysay waxay ku sheegtay inuu ku jiro kaalinta 51aad ee dadka duunka ugu handida badan .
“Tani maaha wax la yaab leh , sababtoo ah isaga wuxuu ahaa qofka bixiya deeqaha ugu badan Hindiya iyo xitaa qaarada mararka qaar,” Ayuu yidhi Deval Sanghavi, oo aasaasay Dasra, shirkad istiraatiijiyadeed ee deeq bixinta. Waxay la shaqaysaa qaar ka mid ah deeq bixiyayaasha ugu wayn ee Hindiya, oo u hoggaansan in lacagtooda ku baxdo sababo kala duwan oo aan faa’iido doon ahayn.
73-sano jirkan ayaa hantidiisa bixinayay muddo dheer. Sanadkii 2013, wuxuu noqday qofkii ugu horeeyay ee u dhashay Hindiya oo saxiixo Heshiiska Giving Pledge , oo uu ku dadaalaye mudane Gates iyo mudane Buffet, wuxuuna ku dhiirri galinayay dadka hodanka ah inay deeq ku bixiyaan kala bar ka mida hantidooda.
Waxa uu ahaa 21sano jir markii uu iskaga haray Jaamacadda Stanford si uu ugu biiro Wipro, oo ah shirkad uu aabihii aasaasay 1945dii. (Wuxuu dib ugu soo laabtay waxbarashada oo uu dhammeeyey 2000). Waxuu xilligaas uu maamulayay Wipro, oo ah warshad qudaarta kaso saarta saliidda, waxayna ka mid noqotay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn uguna guulaha badan ee Hindiya.
Nasiib darro Mr Premji ayaa ah qof jacel kalimada, dadweynaha ama warbaahintana lama hadlo badanaa. Hase ahaatee, sannado badan, qaab nololeedkiisa aan caadiga ahayn iyo deeqsinimadiisa ayaa uso jeeday inay dad badani ay ka helaan. Sheekooyinka ku saabsan sida uu weli u sareeyo dhaqaalahiisa, ayaa dad badani aad ugu riyaaqeen kuwaas oo waddanka qiime badan ku leh, gaar ahaan kuwa hodanka ah.
Mr Premji deeqsinimada kaligiis kuma ahan . Labada kale Nangan iyo Rohini Nilekani ayaa ballanqaaday inay 50% hantidoodii ay deeq ku bixin doonnaan; Biocon barnaamijkiisa Kiran Mazumdar-Shaw 75% oo ka mid ah hantideeda ayay bixisay; qoysas kale oo badan ayaa iyaguna waxay maal galiyaan isbitaallada, iskuuladda, farshaxanka iyo cilmi baarisyada. Dhammaantood, sida Mr Premji, waxay maalkooda shakhsi ahaaneed ku bixinayaan arrimo samo fal ah.
Tata Trust, oo shaqsiyaad ka hesha hanti iyo faa’iido oo ka mid ah shirarka Hindiya ugu weyn oo sanado badan la qabtay, ayaa noqday kii ugu fiicnaa ee Hindiya muddo tobanaan sano ahna deeqo bixinayay. Hada waxaa mamula Mudane Premji, kaas oo maalgeliya waxbarashada, daryeelka caafimaadka iyo warbaahinta madaxa banaan iyo waxyaaba kale.
Haddii aad xisaabta ku darto dhammaan lacagahii ay bixiyeen deeq bixiyeyaasha qaniga ah (qof kasta oo bixiyay in ka badan $ 1.4m) sanadihii ugu dambeeyay, Mr. Premji ayaa 80% oo ka mid ah lacagtaas leh, sida ku cad warbixintii ugu dambeysey ee deeqda ku saabsan oo ay soo diyaariyeen Dasra iyo Bain. warbixinta ayaa sidaas leh. (Taasina kuma jiro ballanqaad kiisii Maarso).
Naxariistu way sii kordhaysaa, ayuu yidhi Mr Sanghavi, laakiin maaha mid si deg deg ah u sii kordhaysa. Hantida gaarka loo leeyahay ee India ayaa kor u kacda 15% sanad kasta intii u dhexeysay 2014 ilaa 2018.
Warbixinta Dasra waxay tan u aragtaa ” mushkilad ” maaddaama qoysaska hantida leh ah ee qaniga ah ay kordheen 12% 5tii sano ee la soo dhaafay, waxaana la filayaa inay laba jibaarmaan 2022.
Marka la barbardhigo boqolleyda saafiga ah uu Maraykanka sannad kasta bixiyo, warbixinta ayaa ku qiyaaseysa in dadka hantida leh ee reer hindiya ah ay bixin karaan $ 5bn ilaa $ 8bn oo deeq ah sannad kasta.
Maxaa hortaagan iyaga?
“Waxaa jirta cabsi weyn oo laga qabo canshuurta,” ayuu yiri Ingrid Srinath, oo ah Agaasimaha Xarunta Saameynta Bulshada iyo bixinta deeqaha ee Jaamacadda Ashoka ee Delhi.
“Kuwa [hodanka ah] ma rabaan in ay aya indhaha ay ku dhacaan, ama ay noqdaan bar tilmaameed oo lacagta lagu qabsado.
Waxay aaminsan tahay sabab kale inay noqon karto in hantida Hindiya ay weli tahay hal jiil oo keliya, kuwa aan hantida aan aadka u badnayn haysta waxay amaan ku dareemaan wax ku filan bixiyaan.
Ma jiro qoondeeyn diiwaan-galineed oo raadraacaya deeq-bixiyeyaasha Hindiya. Sharciyada canshuurtu waa kuwo adag, mana jiraan waxyaabo badan oo dhiirigeliya bixinta. Sidaas darteed warbixinnada laso saaro, sida Dasra oo kale, waxay ku tiirsan tahay ilo wareedyo dhawr ah, oo ka socda dawladda illaa qaybo saddexaad oo dabo gal sameeya .
“ma haboona inaad ka hadashid inta aad bixisay ,” marwo Srinath ayaa sidaas sheegtay oo ka socotay Jaamacadda Ashoka, waxayna intaas raacisay , waxaa na maal galiyay ilaa 100 deeqbixiye, mid kasta oo ka mid ah waxuu bixiyay wax ka badan $ 1.4m laakiin way diiden in si cad loo so bandhigo.
Laakiin Anant Bhagwati, oo ka mid ah qorayaasha warbixinada Dasra , ayaa sheegay in ayadoo aan loo eegin sida ay u liidato ururinta xogta, balanqaadyada waawayn ayaa ah kuwo aan la wayi Karin xogtooda.
“Haddii aad eegto dadka lacagta haysta, mabixiyaab ,” ayuu yiri.
marwo Srinath way ku raacsan tahay: “hadii aan nahay dadka reer Hindiya waxaan leenahay dareen xooggan oo ah inaan sidaaan si ka fiican aan samayn karno.”
Sadaqo ama deeeq bixin
Mudane Bhagwati ma yareeyo deeq-bixiyeyaasha oo maalgeliya jaamacadaha ama isbitaalada gaarka ah, laakiin waxa ay u baahan yihiin deeqbixiyayasha Hindiya, ayuu yidhi, waa dadka ku hawlan xalinta dhibaatada. ma aha oo kaliya in la xaliyo dhibaatadawaxa aan doorbidayno , ww waxaan doonayna in himilooyinka horumarka siilasii xoojiyo. waxay tani so oaf jari kartaa saboolnimada iyo gaajada si dadka loo siiyo tamar nadiif ah.
ujeeddadu waxay tahay – Dasra waxay u doodayso – waxay ka dhigan tahay farqiga u dhexeeya samafalka iyo deeqaha. Inkasta oo mida hore ay noqon karto mid saboolnimada hal maalin hoos u dhiga karta, haddana waxaa loo baahan yahay maalgelin aan faa’iido laga rabin oo ka shaqeeya in hoos loogu dhigo ama gaajada gebi ahaanba laga hortago.
Qiyaastan hadii la qaato, dadka Hindida ah ee hantida leh waxay noqon karaan kuwo sadaqo bixiyo , laakiin aan ahayn kuwa deeqaha bixiya.
Muhiimadda ugu weyn waxay tahay ayuu leeyahay ,mudane Bhagwati, waxaa loo baahan yahay deeq-bixiyeyaayal kuwaas oo maal-galin sameeya. Taas waxay noqon kartaa balanqaad aan caddayn sida lacagta loo isticmaalayo.
Sidaas darteed, tusaale ahaan,hay’addaha aan faa’iido doon ahayn oo ka shaqeynaya hagaajinta fayadhowrka ayaa isticmaali karta lacagta deeq-bixiyeyaasha si loo dhiso musqulo, shaqaaleysiiya dad badan ama xitaa ay iibsadaan laptop ama qalab kale oo ka dhigi kara iyaga kuwo wax soo saar leh. Laakiin deeq bixiyayaasha badankooda, Mr Bhagwati ayaa sheegay, in ay dejin doonaan xaaladaha ku saabsan sida ay doonayaan in lacagta loo isticmaalo. Si kale haddii loo dhigo, waxay ku adkeysan doonaan musqulaha la dhisi doono.
Tan waxuu ugu yeera “wax bixinta xaddidan ” oo wuxuu sheegay in ay adag tahay in dadka la isku dayo in ay siiyaan hab kale.
Laakiin qaar ka mid ah kuwan ayaa isbedelaya. “Horaantii waxaad siisay intii aad awoodaysay oo aad rajeyneysay inay wax kaso baxaan ,” Ms Srinath ayaa leh, iyada oo intaa ku dartay in horaantii, dadka intooda badan ay doonayeen inay maal galiyaan waxbarashada.
Laakiin hadda, ayay ku dartay, khayraadka Hindiya ayaa ugu dambeyntii meelo kala duwan oo ka baxsan waxbarashada – fayadhowrka, caafimaadka maskaxda iyo cilmi baarista.
Caqabadda ugu weyni waxay ahayd farqiga u dhexeeya waxa uu Mr Sanghavi ku magacaabo “ficil iyo ujeeddo”. Qaar ka mid ah bilyaneeradda ayaa kaliya doonaya in ay bixiyaan hantidooda.
Ms Srinath ayaa sheegtay in deeq-bixiyeyaashu ay saameeyn ku yeelan karaan waxyaabo badan, oo ka mid yihiin waalidiintooda iyo kalsoonida bulshada . Laakiin deeqsinimada sifo ahaan, ayay ku dartay, waxay si weyn ugu xiran tahay habka aad u aragto adduunka iyo kaalintaada.
“Deeqsinimadu dhab ahaantii ma ahan wax ku saabsan hantida aad haysato inta ay la’egtahay.”
Previous articleBBC-da oo heshiis 300 milyan oo Gini ah la gashay Discovery Channel
Next articleAUN, Al Fanaan Faysal Cumar Mushteeg,Daawo Heesta Heesaha , Macalin+Fanaan+ Xigmaawi+ Masrixiyad Dabiici ah,
Boqor Buurmadow oo Raaligelin ka bixiyey Hadallo uu jeediyey oo Cadho badan abuuray
F.C.Waraabe oo ka hadlay Safarkii Hogaamiyeyaasha Ucid & Waddani ee Nairobi,Qadiyada Boqor Buurmadow & Booqashadii M/weyne Mustafe Cagjar ku yimi S/land
Rabshadihii Capitol: Michael Jackson nin isu ekeysiiyay oo la dagaalay garsooraha maxkamadda Mareykanka
Wefti Safiiro ah oo soo gaadhay Hargeisa
Xukumada S/land oo shaacisay Qorshe lagu xakamaynayo Baraha Bulshada
Dawladaha Carabta oo ka fikiriya inay Maalgashadaan Somaliland & Dalal kale...
Magaalada aanay booliisku ku dhicin inay ka baxaan saldhigyadooda
Addoon ahaan ayaa afar jeer Liibiya la iigu kala iibsaday
Qiso dhexmartay Sh Cabdirashiid sh Cali Suufi & Siyaad Barre |...
Anigu xisbi hore maan galin laakiin waxaan idin leeyahay, sucaad carmiye